Entecavir hydrate ntụ ntụ (209216-23-9) ≥98% | AASraw R&D Reagents
/ ngwaahịa / Ndị R & D mmeghachi omume / Entecavir hydrate ntụ ntụ
Rating: SKU: 209216-23-9. Category: Ndị R & D mmeghachi omume
AASraw nwere njikọ na mmepụta ikike site na gram ka usoro nchịkọta nke Entecavir hydrate ntụ ntụ (209216-23-9), n'okpuru usoro CGMP na usoro nchịkwa mma.
Na-enyocha ikpuchi uhie
Raw Entecavir hydrate ntụ ntụ isi agwa
aha: Entecavir hydrate ntụ ntụ
Usoro Molecular: C12H17N5O4
Molekụla arọ: 295.29
Raw Entecavir hydrate ntụ ntụ na ojiji
Entecavir hydrate ntụ ntụ Usage
Nnukwu uzuzu a na-emepụta ntụpọ bụ deoxyguanosine nke analognaviruses (EC50 = 3.7 nM megide nje virus nke ịba ọcha n'anya B (HBV) na mkpụrụ ndụ imeju 2.2.15. In vitro, entecavir hydrate powder, na-egosi na njikọta dị elu karịa HBV DNA polymerase karịa mkpụrụ guanosine triphosphate na-eme ka HBV DNN replication na ntinye 3 na ụzọ ntụgharịghachi: priming, reverse transcription, na DNA dabeere DNA njikọ. Enwere ike igosi ọgwụ nke Entecavir hydrate raw powder na ụdị osisi HBV. A na-eme ihe omume na mpempe akwụkwọ I / II nke na-agụ akwụkwọ na Entecavir na-enweta ntụ ntụ site n'aka Ngalaba Nri na Ọrịa US nri maka ọgwụgwọ nke ndị okenye nwere ọrịa ịba ọcha n'anya na-adịghị ala ala.
Ntinye akwa ntụ ntụ (ETV), nke e rere n'okpuru aha aha Baraclude, bụ ọgwụ ọgwụ nje na-eji agwọ ọrịa ịba ọcha n'anya B (HBV). A ga-ejikwa ndị nwere ọrịa AIDS na HBV antiretroviral ọgwụ. A na-eji ọnụ eme ihe dị ka mbadamba ma ọ bụ ngwọta.
Mmetụta ndị nkịtị na-agụnye isi ọwụwa, ọgbụgbọ, ọbara ọbara dị elu, ma belata ọrụ akụrụ. Mmetụta utịp na-agụnye ịba ụba nke imeju, ọkwa ọbara lactate dị elu, na ọnya imeju ọ bụrụ na akwụsịre ọgwụ ahụ. Ọ bụ ezie na ọ dị ka ọ dịghị njọ site na iji n'oge ime nwa, ọ bụghị nke a na-amụ nke ọma. Entecavir hydrate raw powder is in nucleoside reverse transcriptase inhibitors (NRTIs) ezinụlọ ọgwụ. Ọ na-egbochi nje ịba ọcha n'anya B site na ịba ụba site na igbochi transcriptase transplant.
A na-ejikarị ịba ọcha na ịba ọcha n'anya B na-emeso ọrịa ịba ọcha n'anya nke B na ndị okenye na ụmụ 2 afọ na ndị okenye na-eme ka ịrịa nje na ihe àmà nke ọrịa na-arụsi ọrụ ike na elevation na imeju enzymes. A na-ejikwa ya igbochi HDV reinfection mgbe a na-emegharị ya na imeju ndị HIV bu nje HBV. Ịbanye na mmiri ọgwụ rawpowder adịghị arụsi ọrụ ike megide nje HIV, mana anaghị akwado ya ka o jiri nje HIV-HBV bu nje ndị na-enweghị nje HIV na-egbochi nje HIV  dịka ọ pụrụ ịhọrọ maka iguzogide lamivudine na emtricitabine na nje HIV.
A na-amụchapụta nrụpụta nke Entecavir hydrate ntụ ntụ n'ọtụtụ dị iche iche, abụọ ndị ìsì, ọtụtụ ule. Ịmepụta uzuzu site na ọnụ dị irè ma bụrụ nke a kwadoro nke ọma.
A na-eji ọnụ eme ihe dị ka mbadamba nkume ma ọ bụ ngwọta. Ihe eji eme ihe na-adabere na ibu mmadụ. A kwadoro ihe ngwọta maka ụmụaka karịa afọ 2 bụ ndị ruru 30 n'arọ. A na-atụ aro uzuzu ntụ ume ka ọ dịkarịa ala awa 2 tupu ma ọ bụ mgbe nri gachara, n'ozuzu n'otu oge kwa ụbọchị. Ejighi ya n’ime ụmụaka na-erughi afọ 2. A na-atụ aro mgbanwe ndị a maka ndị nwere obere ọrụ akụrụ.
Ịdọ aka ná ntị na Entecavir hydrate ntụ ntụ
Ihe ka ọtụtụ n'ime ndị na-eji Entecavir na-eme ka ntụ ntụ ghara inwe mmetụta ọ bụla. Ihe ndị ọzọ kachasị emetụta gụnyere isi ọwụwa, ike ọgwụgwụ, dizziness, na ọgbụgbọ. Ihe na-adịghị emetụta ya gụnyere mgbagwoju anya ụra na ọgwụ mgbagwoju anya dịka afo afọ, afọ ọsịsa, na ịgba agbọ.
Mmetụta dị egwu site na Entecavir na-edozi ntụ ntụ ntụ gụnyere lactic acidosis, nsogbu imeju, imeju mmụba, na abụba n'ime imeju.
Nyocha nke ụlọ nyocha nwere ike igosi mmụba na alanine transaminase (ALT), hematuria, glycosuria, na mmụba na lipase. A na-atụle nlekota oge nke ọrụ hepatic na hematology.
Nnukwu uzo na-eme ka uzuzu di na ya bu ihe ana-emeputa nke 2-deoxyguanosine nke nwere nje antiviral megide nje nriananwu B (HBV). Entecavir hydrate raw ntụ ntụ na-arụ ọrụ na vivo ka 5-triphosphate metabolite. N'aka nke ya, n'ụdị triphosphate na-esonye na mkpụrụ nke deoxyguanosine triphosphate (dGTP) maka incorporation n'ime nje DNA. Ntinye aka nke ụbụrụ triphosphate ọrụ nke Entecavir hydrate ntụ ntụ na-egbochi transcriptase (RT) nke RNA na-adabere na RB-DNA polymerase na-adabere na RNA, na, ya mere, ntinyeghachi DNA na ịdegharị.
Ntughari uzuzu uzuzu bu uzo a na-eji guanosine eme ihe iji mee ihe banyere oria mmikpo B na-ebute oria (HBV). Ọ bụrụ na ị gwọọ ọrịa ịba ọcha n'anya B n'oge a ma ọ bụ mgbe a gwọchara ya, ọ nwere ike ịchọta ịmalite ịmalite ịgwọ ọrịa.
Na-eme ka mmiri na-eme ka ike gwụ
Entecavir hydrate ntụ ntụ Marketing
Ụzọ ịzụta Entecavir hydrate ntụ ntụ si AASraw